डाटा चालित रणनीति जेडी-स्तर सामाजिक विज्ञापन बनाउनुहोस् Martech Zone
शुक्रबार, अप्रिल 17, 2020 शुक्रबार, अप्रिल 17, 2020 माइकल रे
स्टार वार्स वर्णन गर्दछ सेना केहि चीज जुन सबै चीजहरूमा बग्दछ। डार्थ वाडर हामीलाई बताउँछ कि यसलाई कम नगर्न र ओबी-वानले लूकालाई बताउँदछ कि यसले सबै चीजहरू एकसाथ बाँध्छ।
सामाजिक मिडिया विज्ञापन ब्रह्माण्ड मा हेर्दै, यो छ डाटा यसले सबै चीजहरूलाई एकसाथ बाँध्छ, रचनात्मक, दर्शकहरू, सन्देश, समय र अधिकलाई प्रभाव पार्दै। यहाँ केहि पाठहरू छन् तपाइँ कसरी अधिक शक्तिशाली, प्रभावशाली अभियानहरू निर्माण गर्न बल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
अध्याय १: स्पष्ट उद्देश्यहरूमा ध्यान दिनुहोस्
तपाईंको ध्यान तपाईंको वास्तविकता निर्धारित गर्दछ।
Qui Gon जिन्
फोकस कुनै पनि सफल अभियानको एकल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व हो र फोकसको अभाव असफलताको सबैभन्दा ठूलो कारण हो। स्पष्ट, मापनयोग्य उद्देश्य फरक पर्दछ र ती हुनेछ तपाईंको वास्तविकता निर्धारण गर्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले एक अभियान उद्देश्य छनौट गर्नुभयो, तपाईंको वेबसाइट र सामाजिक च्यानलहरूमा डाटा पोइन्टहरू प्रयोग गर्नुहोस् यदि यो प्राप्य छ भने हेर्नुहोस्।
तपाईंको उद्देश्यमा फोकस गर्नुहोस्: १,००० सम्भावित ईमेल ठेगानाहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
वेबसाइट डाटा समीक्षा गर्नुहोस्: विगतका डेटामा आधारित, हामी हेर्दछौं कि यो फाराममा २ people जना लिईन्छ एक ईमेल ठेगाना प्राप्त गर्नका लागि।
वेब यातायात लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुहोस्: यदि २ people व्यक्ति = १ ईमेल ठेगाना, यसले २ page,००० हिटहरू त्यो वेब पृष्ठमा लिनेछ १,००० ईमेल ठेगानाहरू प्राप्त गर्न।
सामाजिक परिदृश्यहरू चलाउनुहोस्: धेरै जसो सामाजिक विज्ञापन प्लेटफर्महरूको एक प्रक्षेपण उपकरण छ कि अनुमानित छापहरू, क्लिकहरू वा रूपान्तरणहरू देखाउँदछ। २ tools,००० वेबसाइट हिटहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्नका लागि यी उपकरणहरूमा तपाईंको बजेट घुसाउनुहोस्।
आकलन गर्नुहोस् र क्यालिब्रेट गर्नुहोस्: यदि तपाइँको बजेट संग तपाइँको गोल वर्ग, महान! यदि यो अन्तर्गत छ भने, अधिक यथार्थपरक उद्देश्यहरू सेट गर्नुहोस् वा तपाईंको अभियान बजेट बढाउनुहोस्।
पाठ २: ध्यानपूर्वक तपाईंको मार्ग छनौट गर्नुहोस्
घाटा को डर अन्धकार पक्ष को पथ हो।
धेरै धेरै मार्केटरहरूले यो धारणामा आधारित निर्णय लिन्छन् कि यदि उनीहरूले उनीहरूको विज्ञापन यथासक्दो व्यापक श्रोताको लागि प्रसारण गरेनन् भने उनीहरू प्रतिस्पर्धामा हार्नेछन्। वास्तविकतामा, पत्ता लगाउँदै ठिक दर्शकहरू ग्यालेक्टिक घासको पोशाकमा सुई खोजे जस्तै छ र डेटा तपाईंलाई अधिक कुशलता र लागत प्रभावी मा पुग्न मद्दत गर्दछ।
अब तपाइँसँग प्राय: दर्शकहरूको एक विचार हुन्छ जुन तपाइँ विज्ञापन गर्न चाहानुहुन्छ, तर तपाइँ तिनीहरूलाई पुग्नको लागि सब भन्दा उत्तम समय र ठाउँ निर्धारण गर्न आवश्यक छ। डाटा कसरी निर्णय गर्ने भन्ने बारे यहाँ छ:
नेटवर्क सामर्थ्यमा खेल्नुहोस्: प्रत्येक सामाजिक नेटवर्कको विशिष्ट सामर्थ्य हुन्छ जसले तपाईंलाई दर्शकहरूमा बिभिन्न तरिकाले पुग्न अनुमति दिन्छ। लिंक्डइन, उदाहरणका लागि, रोजगार शीर्षक लक्षितको लागि उत्कृष्ट छ, त्यसैले यदि तपाईंको मुख्य श्रोता हो इन्जिनियरहरू, तपाईं सजिलै लिked्कइन दर्शकहरू तिनीहरूमा पुग्न निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, यदि तपाईंको अभियान एक विशिष्ट ईन्जिनियरिंग टेक्नोलोजीमा केन्द्रित छ (लाइट स्पीड ट्राभल भन्नुहोस्), तपाईं ट्विटर विज्ञापनहरूसँग पूरक हुन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई त्यस कुराकानीको आधारमा व्यक्तिहरूले गरेको कुराकानीमा आधारित लक्षित हुन अनुमति दिन्छ किनकि उनीहरू पहिले नै यस विषयमा संलग्न छन्। ।
सामाजिक विज्ञापनमा, आकार गर्छ कुरा: मा साम्राज्यले प्रहार गर्छ फिर्ता, Yoda प्रसिद्ध लूका बताउँछ कि "आकार महत्व छैन"तर विज्ञापनमा, आकार सबै कुरा हो। सामान्यतया भन्ने हो भने, ठूलो दर्शक पोखरीले सामाजिक विज्ञापन नेटवर्कलाई आफ्नो डाटा एल्गोरिथ्मको माध्यमबाट अझ प्रभावकारी ढ g्गले घेर्न मद्दत पुर्‍याउँछ तपाईंको विज्ञापनलाई जवाफ दिन सक्ने सम्भावित व्यक्ति पहिचान गर्नमा मद्दत पुर्‍याउँछ। सानो दर्शकहरूले ती एल्गोरिदमहरूको लागि कम डाटा प्रदान गर्दछ, तर तिनीहरू अधिक लागत प्रभावी छन् र तपाईंलाई व्यक्तिगत कम्पनी वा उद्योग लक्ष्यीकरण जस्ता चीज गर्न मद्दत गर्न सक्दछन्। हरेक अभियान फरक छ, त्यसैले तपाईंले कास्टिंग कस्टमा कत्ति फराकिलो वा सानो सानो फरक हुनेछ।
दर्शकहरुलाई प्रतिस्पर्धा बनाउनुहोस्: तपाईंसँग असंख्य सामाजिक लक्ष्यीकरण विकल्पहरू छन् जुन अवस्थित ग्राहक सूचीहरू, स engage्लग्नता दर्शकहरू र डेमोग्राफिक्स / रुचिहरू समावेश गर्दछ। अब एकल जहाज मार्केटिंग नाकाबन्दी चलाउन भर पर्नुको सट्टा स्लिमर चलाउनुहोस्, लक्षित दर्शकहरु एक अर्काको बिरूद्धमा र तपाईले निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन सबैभन्दा प्रभावकारी छ र पछाडि प्रदर्शनको आधारमा दिशा बदल्नुहोस्।
पाठ:: डाटामा भर पर्नुहोस्, भाग्यको हैन
मेरो अनुभवमा भाग्य जस्तो कुनै चीज छैन।
जेडी देखा पर्छन् भाग्यशाली उनीहरूको कडा प्रशिक्षण र प्रतिबद्धता को कारणले गर्दा के पत्ता लगाउने कि कुन कार्यवाही लिने र कसरी तिनीहरू atuned छन् सेना तिनीहरूको मार्ग निर्देशन दिन्छ। सामाजिक मिडिया बजारका लागि डाटाले हाम्रो ग्यालेक्टिक विज्ञापन यात्राको प्रत्येक चरणमा उही भूमिका खेल्छ, भाग्यको नभई वास्तविकतामा आधारित शिक्षित निर्णय लिन सक्षम गर्दछ।
अब अभियानको एक ठूलो भागले यसलाई प्रमोट गर्न कस्तो भिजुअल र मेसेजिंग क्रिएटिभ तत्वहरू प्रयोग गरिनेछ भनेर निर्धारण गर्दैछ। प्राय: जसो यसले स्टाफको असहमतिलाई निम्त्याउँछ, तर डाटाले उनीहरूलाई समाधान गर्दछ। यहाँ कसरी छ:
सुरूवात लाइन स्थापना गर्नुहोस्: प्रत्येक रचनात्मक तत्त्व ब्रान्ड मापदण्डको अनुरूप हुनुपर्दछ, सामग्रीको प्रचारित हुन र प्रासंगिक दर्शकहरूको अनुरूप हुनु पर्छ। भविष्यमा के काम गर्छ भनेर अनुमान गर्न विगतमा के काम गर्यो भनेर मूल्या .्कन गर्नुहोस्।
सबै कुराको परिक्षण गर्नुहोस्: धेरै पटक, ब्रान्डहरू तिनीहरूको अभियानलाई तल एकल छवि र सन्देशमा डिस्टल गर्ने प्रयास गर्दछ। खतरा यो हो कि यदि यसले कार्य गर्दछ भने, तपाइँसँग कुनै वास्तविक विचार छैन किन र यदि यो असफल भयो भने, तपाइँलाई के दोष लाग्ने भनेर थाहा छैन। यसको सट्टामा, न्यूनतम चार कोर छवि / भिडियोहरू, विज्ञापन प्रतिलिपिको चार संस्करणहरू, तीन हेडलाइटहरू र दुई कल-टु-एक्शन (CTAs) परीक्षण गर्नुहोस्। हो, यसले सेट अप गर्न धेरै लामो समय लिन्छ, तर अमूल्य डाटा प्रदान गर्दछ कुन तत्वहरूमा काम गरिरहेको छ र किन।
सबै कुरा अनुकूलन गर्नुहोस्: लामो गएका सेट-इट-एर-बिर्सि it यो सामाजिक विज्ञापन अभियानका दिनहरू छन्। जब तपाइँ सुरुवात गर्नुहुन्छ, तपाईले पहिलो हप्ताको प्रत्येक दिन प्रदर्शन मेट्रिक्स विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यस पछि हप्तामा कम्तिमा दुई पटक।
अंडरफॉर्मिing छविहरू, सन्देशहरू वा हेडलाइटहरू हटाउनुहोस्।
छविहरू, सन्देशहरू वा हेडलाइन्समा बजेट सिफ्ट गर्नुहोस् जुन ओभरपरफॉर्मि। हुन्छन्।
यदि एक अभियान मात्र काम गरिरहेको छैन भने, यसलाई निस्क्रिय पार्नुहोस्, डाटाको मूल्याate्कन गर्नुहोस् र बजेटमा रक्तक्षेपण गर्नु भन्दा ठीक गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यदि तपाईं धेरै क्लिकहरू ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ तर कोहीले तपाईंको वेबसाइटमा रूपान्तरण गरिरहेको छैन भने अवतरण पृष्ठ मूल्या page्कन गर्नुहोस् — के विज्ञापनको उर्जा र सन्देश आउँदछ? के तपाइँको फारम धेरै लामो छ? परिवर्तन गर्नुहोस्। परिक्षण। तपाईंको अभियान पछाडि फर्काउनुहोस् र हेर्नुहोस् कि यसले मुद्दा हल गर्दछ कि भनेर।
संकुचित दर्शकहरु: धेरै जसो अभियानका लागि तपाईका लक्षित श्रोताहरू फराकिलो दर्शक समूहमा गाडिएको छ (ग्यालेक्टिक घासको भुँडीमा तपाईंको सुई) र मानिसहरूलाई निकाल्नु यो तपाईंको काम हो। त्यो गर्नको लागि एक उत्तम तरिका प्रदर्शनको आधारमा तपाईंको दर्शकहरूलाई परिष्कृत गर्नु हो।
यदि केहि देशहरू वा राज्यहरूले प्रतिक्रिया गरिरहेका छैनन् भने तिनीहरूलाई तपाईंको दर्शक पोखरीबाट हटाउनुहोस्।
यदि केहि डेमोग्राफिक्सले प्रत्येकको भन्दा दुई पटकको दरमा जवाफ दिँदै छ भने, तिनीहरूलाई समर्थन गर्न बजेट शिफ्ट गर्नुहोस्।
सment्लग्नता दर्शकहरू प्रयोग गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् निर्माणहरू। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं वेबसाइट retargeting को प्रयोग गरी फेसबुक अभियान चलाइरहनु भएको छ भने, एक संलग्नता दर्शक सिर्जना गर्नुहोस् जुन सबैभन्दा सक्रिय व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसो भए एक दर्शक निर्माण गर्न यो श्रोता प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंको नतिजा अझ बढि सुधार गर्नुहोस्।
अँध्यारो स्थानमा हामी आफैंलाई भेट्छौं, र थोरै बढी ज्ञानले हाम्रो मार्गमा प्रकाश पार्दछ.
ज्ञान मामिलाहरू र सामाजिक मिडिया जेडीको लागि, डाटा ज्ञानको एक साँचो स्रोत हो। याद गर्नुहोस् कि तपाईंको सामाजिक मीडिया अभियानहरू सेटअप गर्दा तपाईंले लगत बढाउने डेटा, राम्रो र अधिक अनुमानित तपाईंको परिणामहरू हुनेछन्।
र बल तपाई संग हुन सक्छ, सँधै।
टैग: ओबी वान केनोबीअनुकूलनतारा युद्धहरू
माइकल मा सोशल मीडिया निर्देशक छ STIR विज्ञापन र एकीकृत मार्केटिंग। सामाजिक मिडिया उसको लागि काम भन्दा बढी हो, यो एक उत्कटता हो जसले माइकललाई उनको रचनात्मकता, उसको विश्लेषणात्मक दिमाग, र ग्राहक सेवाप्रतिको प्रेमलाई आफ्नो क्यारियरमा जोड्छ जुन सधैं चुनौतीपूर्ण र कहिल्यै बोरिंग हुने छैन।